Ciidaha "gaarka" ah ayaa imanaya: qorshaynta ugu habboon ee adeegashada kirismaska ​​| Ragga Stylish
Waqtiga kirismaska ​​ayaa yimid, waqtiga wax iibsiga. Si looga fogaado kharash garaynta wax ka badan inta loo baahan yahay, waxay ku habboon tahay in la qorsheeyo dukaamaysiga Kirismaska.
Qorshayntan waa in sida ugu dhakhsaha badan loo sameeyaaLaakiin qorshayntu sidoo kale waxay la micno tahay adeegsiga.
Faa'iidooyinka ugu weyni waxay dhacaan maxaa yeelay waan iska ilaalinaa qalalaasaha dukaamada iyo xarumaha wax laga iibsado, waxaan ka helnaa ficil ahaan wax walba oo kayd ah iyo waliba sababtoo ah waxaan heli karnaa qaar alaabada ka raqiisan intii ka horreysay
2 Tilmaamo ku saabsan dukaamaysiga kirismaska
Mid ka mid ah su'aalaha ugu horreeya waa in la yeesho a faahfaahin shaqsiyadeed taas ayaa la saadaalinayaa mustaqbalka dhow. Isaga ayaynu go’aansan doonaa waxa aan ku bixinno sida ugu saxsan ee suurtogalka ah.
Mid kasta oo ka mid ah kharashaadka aad samaynaysid, waa inaad u kala bixi miisaaniyada una qaybiyo qaybo. Qaybahaani waxay la xiriiraan macmacaanka, qurxinta, cuntada, hadiyadaha, iwm.
Mar miisaaniyad qeexan, waxay ku saabsan tahay la qabsiga iyada, iyo waxyaabo kale si looga fogaado lama filaanka soo socda.
Tilmaamo ku saabsan dukaamaysiga kirismaska
Talada ugu horeysa waa inaad qorsheyso waxyaabaha aad soo iibsaneyso rajeynaya helitaanka hadiyadaha, isbarbar dhig qiimaha oo keydi tikidhada iibsiga.
Xeelad kale oo wanaagsan ayaa ka kooban wax ku iibsadaan lacag kaash ah halkii kaarka. Tani waxay ka fogaan doontaa jirrabaadda inaad ku bixiso wax ka badan intaad bixin lahayd.
Intaadan guriga ka tegin, waa lagugula talinayaa taas sifiican ayaa lagugu ogeysiiyey alaabada iyo dukaamada aad wax ka iibsan doonto. Marka waxaad isbarbar dhigi kartaa labada shay, alaabada iyo dukaamada.
Sida aan aragno, uTilmaam muhiim ah waa inaadan iloobin inaad dalbato rasiid rasiid ah oo aad dhigato meel aamin ah. Waa caddeynta iibsashada alaabta waxayna kaa caawin doontaa inaad dalbato, codsato lacag celin, iwm.
Markaad dooranaysid toy, waa inaad tixgelisaa arrimaha qaarkood. Kuwa ugu muhiimsan ayaa ah kuwa laga soo qaatay badbaadada sheyga, da'da ilmaha. Waxaan sidoo kale tixgelin siin doonnaa qiyamka iyo awoodaha ay yaryaru horumarin karaan.
Ilaha sawirka: El Confidencial / Elle Spain
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Bilowga dukaamaysigaaga kirismaska
Mr Porter wuxuu u dabaaldegayaa sideetameeyadii tifaftirka cusub
Bajaamaha haa ama maya